On nov 19, 2019 14 129
Anatin’ny fampielazan-kevitra tanteraka, ankehitriny, ny kandida avy amin’ny fikambanana ALEFA SAB-NAM, Patrick Nirina Andriamahefa. Kandida laharana faha-3 amin’ny biletà tokana. Hamaly babena ny tanindrazana niaviany, no voalazany fa antony nahatonga azy hanapa-kevitra ny ho fidiana Ben’ny Tanana eny Sabotsy Namehana. Laharam-pahamehana ho azy ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fitantanana mangaraharaha izay matetika vato misakana ny fampandrosoana ny kaominina.
Laharana faha-3 amin’ny biletà tokana, kandida eny Sabotsy Namehana
Fikambanana tsotra ny Alefa Sab-Nam ka tsy misy fampanantenana kintana amam-bolana. “ Rehefa madio sy mangaraharaha ny fitantanana ny fidiram-bola ny kaominina, dia mahazo anjara masoandro ny mponina isam-pokontany”, hoy izy. Manome toky amin’ny fitsonjivana ny tany heverina ho lavitra Andriana koa anefa izy, satria matetika ny hita maso ihany no misy fanatsarana. “Mila tamberina andraikitra amin’ny olom-boafidy ny mponina, izay mazoto mandoa hetra rehefa hitany sy tsapany fa mandeah arak any tokony ho izy ny fitantanana. Izay indrindra no hametrahantsika fanamby, amin’ny mangarahara izay. Tsy hijanona hatreo anefa fa anisan’ny vaindohan-draharaha ho anay eto amin’ny ALEFA SAB-NAM ko any fanafainganana ny taratasim-panjakana rehetra, atao ao amin’ny kaominina. Raha tonga maraina ny olona, ny hariva dia efa mahazo izay tadiaviny. Mila fiarahan’ny rehetra mientana anefa ny fanatanterahana izany”, hoy hatrany izy nandritra ny resaka nifanaovana taminy.
Anisan’ny tombony ho azy ny fahaizana manakaiky vahoaka, hatramin’ny naha-mpanao gazety azy.
Amin’ny alalan’ny mangaraharaha izay, hiezaka ny hitady vol any kaominina amin’ny fametrahana solaitrabe maoderina “Tableau numérique”. Ho entina maneho am-pahibemaso ny asa vitan’ny kaominina, ny tetikasa hatao, ary ny fitantanam-bola izany.
Zanaky ny kaominina Sabotsy namehana I Patrick Nirina Andriamahefa, mahatsapa tsara ny filan’ny tanàna sy ny hetahetan’ny mponina. Nandritra ny naha mpanao gazety azy no voalazany fa nahatsapany izay mangirifiry amin’ny vahoaka any amin’ny kaominina maha kandida azy. “Izany indrindra no nampihetsika ny hambom-po ka nanoloran-tena handray andraikitra”, hoy hatrany izy.
Marihina fa mankalaza ny faha-30 taona naha mpanao gazety azy ny kandida avy amin’ny fikambanana ALEFA SAB-NAM, ity. Raim-pianakaviana 51 taona, manambady ary manan-janaka efatra, mianadahy.
Patrick Nirina Andriamahefa, mivady. Miara-mirona mandritra ny fitetezana ny fokontany miisa 17 ao amin’ny kaominina Sabotsy Namehana
Teny fanevan’ny fikambanana ALEFA SAB NAM: “ Tsy Sandaina Vola ny Tanindrazana “ saingy tsy midika fa hiasa maina akory mponina miara-dalana aminy. “Ny zavatra rehetra atao dia amin’ny rariny sy hitsiny, ary mangarahara hatrany. Izay miasa, mendrika valin-tanany fa tsy amidimidy amin’ny resaka kolikoly kosa ny kaominina sy ny olona ao anatiny”, hoy izy namarana ny resaka.
Raha fehezina, fanovana ho amin’ny tsaratsara eny ifotony no kendren’ny Patrick Nirina Andriamahefa sy ny ALEFA SAB NAM, miaraka amin’ny fanomezan-tanana avy amin’ny vahoaka.